Genesisi 11 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
11 Zvino nyika yose yakaramba iine mutauro mumwe chete uye iine mashoko mamwe chete. 2 Pavaifamba vachienda nechokumabvazuva vakazowana bani munyika yeShinari,+ vakagara imomo. 3 Vakatanga kutaurirana vachiti: “Uyai! Ngatiite zvidhinha, tizviomese nokuzvipisa.” Naizvozvo zvidhinha zvakava matombo avo, asi bhitumini yakava dhaka ravo.+ 4 Zvino vakati: “Uyai! Ngatizvivakire guta uyewo shongwe ine musoro unosvika kumatenga,+ uye ngatizviitirei zita rakakurumbira,+ kuti tirege kupararira panyika pose.”+ 5 Jehovha akaburuka kuti aone guta racho norusvingo rwacho zvakanga zvavakwa nevanakomana vevanhu.+ 6 Jehovha akazoti: “Tarira! Ivo vanhu vamwe, vose vane mutauro mumwe chete,+ uye izvi ndizvo zvavanotanga kuita. Chokwadi, zvino hapana chavangafunga kuita chavachatadza.+ 7 Uya zvino! Ngatiburuke+ tinovhiringidza+ mutauro wavo ikoko kuti varege kunzwanana mitauro yavo.”+ 8 Naizvozvo Jehovha akavaparadzira panyika pose vachibva ipapo,+ uye zvishoma nezvishoma vakarega kuvaka guta racho.+ 9 Ndokusaka rakatumidzwa kuti Bhabheri,+ nokuti Jehovha akanga avhiringidza mutauro wenyika yose ipapo, uye Jehovha akanga avaparadzira+ panyika pose vachibva ipapo. 10 Iyi ndiyo nhoroondo yaShemu.+ Shemu akanga aine makore zana paakabereka Apakishadhi,+ makore maviri mafashamo apfuura. 11 Abereka Apakishadhi, Shemu akararama kwemakore mazana mashanu. Munguva iyi akabereka vanakomana nevanasikana.+ 12 Apakishadhi akararama makore makumi matatu nemashanu, akazobereka Shera.+ 13 Abereka Shera, Apakishadhi akararama kwemakore mazana mana nematatu. Munguva iyi akabereka vanakomana nevanasikana. 14 Shera akararama makore makumi matatu, akazobereka Ebheri.+ 15 Abereka Ebheri, Shera akararama kwemakore mazana mana nematatu. Munguva iyi akabereka vanakomana nevanasikana. 16 Ebheri akararama kwemakore makumi matatu nemana, akazobereka Peregi.+ 17 Abereka Peregi, Ebheri akararama kwemakore mazana mana nemakumi matatu. Munguva iyi akabereka vanakomana nevanasikana. 18 Peregi akararama kwemakore makumi matatu, akazobereka Reu.+ 19 Abereka Reu, Peregi akararama kwemakore mazana maviri nemapfumbamwe. Munguva iyi akabereka vanakomana nevanasikana. 20 Reu akararama kwemakore makumi matatu nemaviri, akazobereka Serugu.+ 21 Abereka Serugu, Reu akararama kwemakore mazana maviri nemanomwe. Munguva iyi akabereka vanakomana nevanasikana. 22 Serugu akararama kwemakore makumi matatu, akazobereka Nahori.+ 23 Abereka Nahori, Serugu akararama kwemakore mazana maviri. Munguva iyi akabereka vanakomana nevanasikana. 24 Nahori akararama kwemakore makumi maviri nemapfumbamwe, akazobereka Tera.+ 25 Abereka Tera, Nahori akararama kwemakore zana negumi nemapfumbamwe. Munguva iyi akabereka vanakomana nevanasikana. 26 Tera akararama kwemakore makumi manomwe, akazobereka Abramu,+ Nahori+ naHarani. 27 Zvino iyi ndiyo nhoroondo yaTera. Tera akabereka Abramu, Nahori naHarani; uye Harani akabereka Roti.+ 28 Gare gare Harani akafa achiri naTera baba vake munyika yaakaberekerwa, muUri+ yevaKadheya.+ 29 Abramu naNahori vakawana madzimai. Mudzimai waAbramu ainzi Sarai,+ asi mudzimai waNahori ainzi Mirika,+ mwanasikana waHarani, baba vaMirika nababa vaIska. 30 Asi Sarai akaramba asingabereki;+ akanga asina mwana. 31 Tera akazotora Abramu mwanakomana wake naRoti, mwanakomana waHarani, muzukuru wake,+ naSarai+ muroora wake, mudzimai waAbramu mwanakomana wake, vakabuda naye muUri yevaKadheya kuti vaende kunyika yeKenani.+ Kwapera nguva yakati, vakasvika kuHarani+ vakagara ikoko. 32 Zvino mazuva aTera akava makore mazana maviri nemashanu. Tera akazofira muHarani.